Vavaka ho famonjena ny ankizy | TOKO VAVAKA
Home Teboka am-bavaka Vavaka ho famonjena ny ankizy
Vavaka ho famonjena ny ankizy
Androany isika dia hiatrika ny vavaka ho famonjena ny ankizy. Zaro amin'ny làlana tokony halehany ny zaza, Ka rehefa antitra izy, dia tsy hiala amin'izany.
Hivavaka ho an'ny zanatsika izahay. Voninahitr'Andriamanitra izany manjo ny olona tsirairay, mpivady manan-janaka ary mpivady miandry, mpitovo manantena ny hipetraka ihany koa. Na inona na inona toetrantsika dia manana zavatra iraisana isika mpino dia i Kristy.
Tsy tokony hanahy be loatra momba ny fikatsahan'ny zanatsika amin'ny fanabeazana, ny hetahetany amin'ny ho avy, ny sakafon'izy ireo, ny fiadanany ary izay rehetra momba azy ireo isika ka manadino ny mandray andraikitra amin'ny fitaizana ara-panahy azy ireo.
Ny famelana ny zanatsika hiditra any ivelany dia mety hanimba bebe kokoa noho ny tsara. Jereo tsara ny fiaraha-monina iainantsika ankehitriny. Miova ny fotoana ary mivoatra haingana ny teknolojia. Hitanay ny ray aman-dreny izay taitra amin'ny fomban'ny zanany ary manontany tena izy ireo hoe ahoana ary aiza no mety hahitan'izy ireo izany.
Satria manome hery antsika amin'ny asa aman-draharaha Andriamanitra ary manome antsika fahombiazan'ny asa mandritra ny fotoana maharitra, mba hamoa voa ara-bola, ny fomba ahalehibeazany, izay fantany, izay ampianarina azy ireo avy any an-trano.
Tsy tokony ailikilika izy ireo mandritra ny fanompoana maraina. Miresaka amin'izy ireo momba an'i Jesosy. Asaivo fitaovana ara-baiboly ho azy ireo. Avelao izy ireo hahafantatra an'Andriamanitra ao an-trano. Ny vokatr'izany dia, rehefa misy fototra mafy orina, izay ahafahan'ny zanaka manondro mafy ny fitiavana an'Andriamanitra ampianarina sy hita eo anelanelan'ny ray aman-dreniny, dia tsy hisy na inona na inona hampihetsika ny fototry ny fahalalana ananany.
Mamorona soatoavina ao am-pony. Ny ray aman-dreny dia tokony hampianatra soatoavina araka an 'Andriamanitra izay hamela azy ireo tsy ho simba. Izy io dia mamolavola ny fomba hisafidianany ny namany any am-pianarana, izany dia ny fomba fandraisan'izy ireo ny tsy fahalotoana ivelany. Fa maninona Satria efa nampiofanina sy nampianarina tao an-trano izy ireo.
Tsy ho lany mihitsy amin'izay hampianarina isika. Misy ny momba ny Baiboly manokana hianaranao, hodinihina sy ianarana avy amin'izany. David Mpanjaka, ohatra, avelao izy hahafantatra hoe iza io toetran'ny Baiboly io. Ireo dia resaka mety hipoitra ao anaty fiara, miverina avy mianatra, mandritra ny fotoana fialan-tsasatra ataon'izy ireo, aorian'ny sakafo sns. Tsy nanjary zavatra izany satria tsy misy fotoana hanaovana fifanakalozan-kevitra toy izany, bitika kely eto ary misy masomboly ambolenao ny fony izay hitsimoka ho voankazo, amin'ny fotoana maharitra. Tsy tokony anontaniana any ivelan'ny trano izy ireo hoe iza avy ao amin'ny Baiboly i Esther ary banga izy ireo. Amin'ny fampianarana sy ny fivavahana dia apetratsika amin'ny zanatsika eo amin'ny pedastal tsara ny zanatsika mba hanana fahasahiana satria efa ampy fitaovana izy ireo.
JESOA dia tsy tokony ho anarana hafahafa ho an'ny ankizy. Voarakitra ao amin'ny Baiboly fa nandray ny ankizy i Jesosy nandritra ny fotoana nahatongavany ho nofo.
13. Ary nisy nitondra zazakely ho eo aminy mba hametrahany tanana; ary ny mpianany niteny mafy izay nitondra azy. 14 Fa tezitra Jesosy, raha nahita izany, ka hoy Izy taminy: Avelao ny zaza hanatona ahy. , ary aza raràna: fa an'ny toa azy ny fanjakan'Andriamanitra.15 Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no tsy handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy hiditra ao akory. 16 Ary nampiakarin'izy ireo izy ny sandriny ,, nametraka ny tanany tamin'izy ireo ary nitso-drano azy ireo.
Avelao izy ireo hahafantatra fa tia azy ireo i Jesoa ary miahy azy ireo Izy. Ampianaro izy ireo hahafantatra fa hikarakara azy ireo isan'andro i Jesosy.
Jaona 3:16, "Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao: nomeny ny Zanani-lahy Tokana, mba tsy ho very izay rehetra mino Azy, fa hanana fiainana mandrakizay.
Ampianaro ny asan'i Jesosy sy ny famonjena ny fanahin'izy ireo amin'ny finoana ny zavatra nataony ho azy ireo. Ny Baiboly dia milaza fa ny finoana dia avy amin'ny fihainoana sy ny fandrenesana avy amin'ny Tenin'Andriamanitra. Ny Teny reny no hataony.
Asan'ny Apôstôly 4:12, "Ary tsy misy famonjena amin'ny hafa; fa tsy misy anarana hafa ambanin'ny lanitra nomena ny olona izay hahazoantsika famonjena." Ampianaro ny ankizy momba ny famonjena.
Ary lazaiko aminareo marina tokoa: Raha tsy miova ianareo ka tonga tahaka ny zazakely, dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra.4 Na iza na iza manetry tena toa an'ity zazakely ity, dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra.
Jesosy Kristy miresaka eto dia nanazava fa ny fon'ny ankizy dia mety ho malemy paika sy tsotra tsy toy ny olon-dehibe izay mety hiteraka henjana amin'ny fanekena ny Goodnews an'i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny sain'ny zaza hatramin'ny nahaterahany dia vato madio. Anjarantsika ny mametraka ny asa, miresaka amin'izy ireo momba an'i Jesosy sy ny Fitiavan'ny Ray.
Ny tanjaka hanaovana izay rehetra ilaina ho antsika Ray aman-dreny sy ireo Ray aman-dreny mikasa, homen'ny Tompo antsika amin'ny Anaran'i Jesosy.
Izany no maha-zava-dehibe ny mivavaka ho azy ireo. Miasa ny vavaka. Rehefa mivavaka isika dia mahita valiny miavaka. Haleloia.
Ray misaotra anao izahay satria amboninay, ny hatsaranao sy ny famindram-ponao maharitra mandrakizay.
Ray misaotra anao izahay noho ny fitiavanao tsy miova amin'ny fianakavianay, misaotra anao satria tsy misy mahasaraka anay amin'ny fitiavan'ny Ray, amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka ho an'ny zanatsika isika, manambara ny fitahian'Andriamanitra sy ny fahendreny amin'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ry Ray any an-danitra ô, misaotra anao izahay noho ny fitahian'ireo ankizy mahafinaritra azonay taminao tamin'ny anaran'i Jesosy.
Raiko mivavaka izahay mba hahafantaran'ny zanakay anao bebe kokoa isan'andro.
Ray mivavaka mba hahazo fahendrena ho an'ny zanatsika, mivavaka isika mba hanao safidy tsara izy ireo, hanao ny zavatra mety amin'ny fotoana mety amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray ô, mivavaka izahay mba hanampianao azy ireo hitombo amin'ny fahalalana anao isan'andro satria ny faniriany sy ny zotom-pony hahafantatra anao isan'andro amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray amin'ny anaran'i Jesosy, mivavaka izahay mba hanolotra anao ny fon'ny zanakay, hamaly tsara ny fitiavanao amin'ny anaran'i Jesosy izy ireo.
Ray any an-danitra izahay dia mivavaka mba hanafahana ny zanatsika amin'ny fitaomana ratsy, ny fiarahana ratsy ary ny fiarahana tsy tia an'Andriamanitra. Izy ireo dia misafidy namana tsara amin'ny fanjakana tsirairay amin'ny fiainany amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, mivavaka izahay ho an'ny teny rehetra ampianarina, ny Fanahin 'Andriamanitra dia hanome izany ao am-pon'izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray Tompo ô, avelao i Kristy hoforonina tsy tapaka amin'ny fiainan'ny zanakay amin'ny anaran'i Jesosy.
Ray misaotra anao izahay noho ny voa rehetra izay efa nivoaka ary hivoaka avy ao an-kibonay, misaotra anao izahay satria anao izy ireo, misaotra anao satria nitantana ny fiainany hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany amin'ny anaran'i Jesosy mahery.
famonjena ny Ankizy
Previous lahatsoratraTeboka vavaka ho an'ny toerana avo kokoa
Next lahatsoratraTeboka vavaka hanoherana ny loza voajanahary
Álvaro Ramos 7 Febroary 2021 Amin'ny 7:53 maraina
Baiboly isan'andro ho an'ny anio 2 Novambra 2018
Vavaky ny fanentanam-panahy amin'ny fotoan-tsarotra